Kooxda Man City Oo Ku Dhaw Dhamaystirka 3 Xiddig Oo Ay Doonayso Xagaaga & Fred Oo Hogaaminaya – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Kooxda Man City Oo Ku Dhaw Dhamaystirka 3 Xiddig Oo Ay Doonayso Xagaaga & Fred Oo Hogaaminaya
Kooxda Man City Oo Ku Dhaw Dhamaystirka 3 Xiddig Oo Ay Doonayso Xagaaga & Fred Oo Hogaaminaya
Kooxda Man City ayaa durba ku sii dhawaanaysa saddex saxiix oo xagaaga ah oo uu ka mid yahay xiddiga khadka dhexe ee 50 milyan lagu qiimeeyo u ciyaara kooxda Shakhtar Donetsk ee Fred sida ay sheegayaan wararku.
Guardiola ayaa si weyn loola xiriirinayay in uu u dhaqaaqi doono xiddiga reer Brazil isaga oo u arka badalka mustaqbalka fog ee Fernandinho oo 32 jir ah.
Wargayska The Times ayaa sheegaya in ay kooxda shakhtar diiday in uu xiddigan u soo dhaqaaqo Man City laakiin kadib wadahadalada oo sii socday 24 jirka ayaa haatan ku soo biiri doona dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Fred ayaa kooxda reer Ukrain ku soo biiray sanadkii 2013 markii uu Fernandinho ku soo biiray kooxda Man City laakiin haatan waxa uu xilli ciyaareedka dambe booska kula tartami doonaa xiddiga ay isku xulka yihiin.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ay man city u dhaqaaqayso saxiixa xiddiga Philippe Sandler kaas oo u ciyaara xulka Holland ee U20 sidoo kale daafaca uga ciyaara kooxda PEC Zwolle.
Da,yarka kooxda PSG ee Claudio Gomes oo 17 jir ah ayay sidoo kale kooxda Man City ku dhawaanaysa kadib markii ay in badan daawadeen qaab ciyaareedkiisa.
Xiddiga ayaan wali u safan kooxda 1-aad ee PSG laakiin waxa uu si joogto ah ugu ciyaaraan kooxda da,yarka ee PSG iyo waliba xulka qaranka France ee U18.